Indlela yokwenza uqikelelo lweeNkonzo ze-SEO IiNkonzo?
Masiqale ukufuna iinkonzo ze-SEO. Ngokuqhelekileyo, ikota yokuqala ye-intanethi yokuthengisa i-intanethi ibaluleke kakhulu. Uninzi kangakanani uzimisele ukufumana imali kwi-budget yakho yokuthengisa? Njengoko kuninzi iarhente zedijithali ezibonelela iinkonzo zazo kwiwebhu kwaye ixesha liyi-essence - hybrid ltc life insurance. Ngethuba usaphila kwisigqibo esilungileyo sokuthatha iiveki (okanye iinyanga) ekwenzeni iifowuni, okanye mhlawumbi iingxoxo ze-imeyile, ukhuphiswano lwakho luya phambili, phambili kunye. Ngoko, ingcinga efanelekileyo yokufumana iinkonzo ezintle ze-SEO ngokukhawuleza. Ixabiso lawo, nangona kunjalo, kufuneka libe neengqiqo ngokwaneleyo, kungabonakali ngokuqhelekileyo uhlahlo lwabiwo-mali oluqinileyo lwexesha lokuqalisa.
Ngoku siyazama ukujonga umbono kwimbono yeenjini zokukhangela, ezifunekayo ukuqonda iimpawu zabo zokukhetha kunye neendlela zokuziphatha xa zivuza iiwebhusayithi ezinezikhundla eziphezulu. Okokuqala, masizame ukuzibuza imibuzo ebalulekileyo:
Yintoni okulindele ukuba ube neenkonzo ze-SEO?
Ngaba ucinga i-SEO njengabantu bonke?
Mhlawumbi isebe lakho lokuthengisa lifuna nje ukuliqhuba?
Okanye unesiqiniseko kulo mbandela, ujonge ukuphakamisa izinga lakho lewebhu kunye nokuhambisa umlinganiselo omkhulu wokungena kwemali kwixesha elide?
Masizise omnye umfanekiso olula: ukuqesha iinkampani ze-SEO iinkonzo zifana nokuthenga imoto. Ewe, ngokunyanisekileyo, ukhetho lwakho luya kuxhomekeka kwiimfuno zakho, ezihambelanisiweyo kunye nokulinganiswa kwexabiso elipheleleyo malunga nokuqikelela nokukwazi ukuhlawuleka kwebhajethi yakho yangoku yokuthengisa. Isicwangciso esihle kakhulu se-SEO siqala ngokuqikelela injongo yakho yehlabathi kunye neemfuno zabathengi bakho. Ukuqala ukususela kumbindi, iinkonzo zokuncedisa i-injini ezincinci zihlala zifana ne-deal trading. Ewe, unokuzama ukugcina imali ethile. Nangona kunjalo, abayi kuzisa okungakumbi.
Ngelo xesha, akukho mgangatho omnye xa kuziwa ekukhetheni iipakethe ezifanelekileyo zeenkonzo ze-SEO. Isiphakamiso esibaluleke kakhulu kukuba i-SEO ayikho malunga nokulungisa izinto okanye nje ukuyihambisa. Ukuyiqwalasela njengendlela yokulungisa ngokukhawuleza ukuzisa ukuthengisa kwakho kunye neendlela ekubuyiseni kwindlela engafanelekanga. Ngokwenza njalo, uya kuphela ukuchitha imali yakho. Into efanelekileyo kukuba i-SEO efanelekileyo inokukunika i-ROI efanelekileyo: akukhona nje ngokufumana i-SERP engcono kunye nokupompa ngaphezulu kweendlela. Enyanisweni, injongo ekugqithiseleyo kukuguqula amakhasimende akho angaphuhliswayo ekuqhubeni okukhulu kokuhlawula abathengi.
Ngoko ke, uza kufumana njani ukuba ishishini liphuculwe kunye neenkonzo ze-SEO ze-high caliber?
Okokuqala, kufuneka kukuncedise ukugxila kwiinjongo ezibalulekileyo, iimfuno kunye neengxaki zabathengi bakho;
Ukuchonga iziphumo eziqhelekileyo ezilindelwe ngabaphulaphuli kwiwebhusayithi yakho yezoshishino;
Kukunceda ngokuchonga nokuphucula ixabiso lekhasi lakho lokuhlawula;
Ukukufumanisa zonke iinkalo zokufumana inzuzo kwishishini lakho elibandakanyekayo;
Fumana amava omsebenzisi weendwendwe ngamnye njengomntu okhethekileyo, ukuguqula kubathengi.
Ngako ke, iindleko zeenkonzo ze-SEO zithengela kwimiphumo enomlinganiselo ofuna ukuyifumana, umgangatho wabo, kunye nexesha elimileyo. Kubonakala ukuba, ukuba nexabiso elincinci lithetha ukufumana inkqubela phambili. Khumbula, oko utyalo-mali akuyiyo into oyixabiso. I-ROI yakho ngokwemvelo ichaza i-SEO. Akungathandabuzeki, ukuba ne-5, 10, okanye i-20 enyukayo kwindleko malunga nento oyichithayo isizathu esilungileyo sokuthi: akuzange kuthathe nantoni na!